गुगलको मिठाई मोह - Karobar National Economic Daily
गुगलको मिठाई मोह
query_builderAugust 25, 2017 10:11 AM supervisor_accountकिरण आचार्य visibility485
काठमाडौं : गुगललाई मिठाई किन मनपर्छ ? यसको सिधा उत्तर अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन । तर नजानिँदो तरिकाले गुगलले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम (ओएस)को नयाँ भर्सनको नामाकरण जहिले पनि खानापछि खाने ‘डिजर्ट’ वा मिठाईजन्य गुलियो उत्पादनको नामबाट गर्दै आएको छ ।
यसै क्रममा यसै साता गुगलले एन्ड्रोइड ओएसको नयाँ भर्सन ८.० सार्वजनिक गरेको छ, जसको नाम ‘एन्ड्रोइड ओरियो’ दिइएको छ । ओरियो पछिल्लो समयमा निकै चर्चित बिस्कुट र चकलेटको मिक्स फ्लेवरको खाद्य उत्पादन हो ।
हरेक ओएसको नयाँ भर्सन सार्वजनिक गर्दै पुनः मिठाईलाई नै प्राथमिकता दिएको छ । यद्यपि कम्पनीले किन मिठाई वा चकलेट वा गुलियो कुरालाई नै प्राथमिकता दिएको छ भन्ने उत्तर भने कसैसँग छैन । केही समयअघि सिएनएनसँग गुगलका प्रवक्ताले निर्माण समूहका सदस्यको निर्णय बमोजिम नयाँ भर्सनको नामाकरण गर्ने गरेको बताएका थिए ।
उनले यस विषयमा विस्तृतमा कुनै दिन खुलाउने बताएका थिए । यद्यपि सुरुदेखि नै कुनै न कुनै चकलेट वा मिठाईको नामले नयाँ एन्ड्रोइड चिनाएर गुगलले नयाँ भर्सनमा नयाँ स्वाद छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको अनुमान गर्न भने गाह्रो छैन । किनकि हरेक नयाँ भर्सनमा गुगलले केही न केही नयाँ फिचर ल्याएकै हुन्छ ।
चर्चित नेपाली उखान ‘रातो राम्रो, गुलियो मिठो’ कै चरितार्थझैं गुगलले आठौं संस्करणको ओएसलाई पनि गुलियो नै बनाएको छ । यतिबेला प्रविधि जगतको चर्चा पनि ओरियो विस्कुटको मिठासको परिकल्पनासँगै एन्ड्रोइड चर्चा चुलिन थालेको छ । एन्ड्रोइडमा चल्ने स्मार्टफोनको संख्यामात्र सन् २०१६ को अन्तिम त्रैमाससम्म ३ करोड ५२ लाख थान पुगेका छन् ।
जबकि यो अवधिमा ४ करोड ३२ लाख थान स्मार्टफोन बिक्री भएको गार्टनरको तथ्यांक छ । अनुसन्धानमूलक संस्था इन्टरनेशनल डाटा कर्पोरेसन (आईडिसी) को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ को पहिलो त्रैमासमा ८५ प्रतिशत हिस्सा एन्ड्रोइडको छ । दोस्रोमा रहेको एप्पलको अपरेटिङ सिस्टमको हिस्सा १४.७ प्रतिशत छ भने विन्डोज र अन्यको हिस्सा ०.१ प्रतिशतमा सीमित छ ।
विश्वका बहुसंख्यक स्मार्टफोनहरू एन्ड्रोइडमा आधारित छन् । यस मानेमा विश्वका सयौं स्मार्टफोन वा अन्य ग्याजेट उत्पादकको लगानीसमेत गुगलको ओएसमा आधारित छन् ।
त्यसैले पनि गुगलले हरेक वर्ष आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमको अपडेट गर्ने गरको छ । गुगलले ओएसको समग्र प्रस्तुति, सुरक्षा सतर्कता र अन्य फिचरहरूलाई उपभोक्ता अनुकूल बनाउँदै आएको छ । चलाउन सजिलो हुने भएकाले पनि गुगलको एन्ड्रोइड नै उपभोक्ताको पहिलो रोजाइमा परेको हो ।
आफ्नै अपरेटिङ सिस्टमका मोबाइल उत्पादन गर्दै आएका नोकिया, ब्लाकबरी र माइक्रोसफ्टसमेत बजार विस्तार गर्न चुनौती थेगेपछि हाल एन्ड्रोइडमा आधारित स्मार्टफोन उत्पादनमा लागिरहेका छन् । एप्पलको आइओएसको भने निकै कडा सुरक्षा सावधानीका कारण चर्चित मानिन्छ । तर एसियाली र नेपालजस्ता मुलुकमा भने एन्ड्रोइडकै हिस्सा सर्वाधिक छ । विश्वकै ग्याजेट व्यापारको केन्द्र मानिँदै आएको भारतमा पनि एन्ड्रोइडको हिस्सा ९७ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ ।
एन्ड्रोइड १.० देखि ८.० सम्म
गुगलले एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम सार्वजनिक गरेको एक दशक पुग्दैछ । सन् २००८ को सेप्टेबर २३ तारिकमा पहिलो भर्सन १.० सार्वजनिक भयो भने २००९ को फेब्रुअरी ९ तारिकमा १.१ भर्सन सार्वजनिक गरेको थियो ।
यी दुई भर्सनपछिको अपडेटेड भर्सन सोही वर्षको सेप्टेम्बरमा एन्ड्रोइड १.५ सार्वजनिक गर्दै गुगलले यो भर्सनको नाम ‘कपकेक’ दिएको थियो । त्यसयताका हरेक भर्सनलाई खानापछि खाने ‘डिटर्ड’ वा गुलियोजन्य उत्पादनको नाम दिँदै आएको छ ।
२००९ मा गुगलले चार पटकसम्म एन्ड्रोइड भर्सनको गुणस्तर सुधार्दै नयाँ भर्सन सार्वजनिक गरेको थियो । सो वर्षको अन्तिम भर्सन थियो २.० इक्लेर भर्सन । एन्ड्रोइड डिभाइसको वृद्धिसँगै गुगलले इक्लेर भर्सनमा थप परिमार्जन गर्दै २०१० को मेमा फोर्यो र डिसेम्बरमा जिन्जरब्रेड सार्वजनिक गरेको थियो । यी दुबै भर्सन एन्ड्रोइडको २.२ देखि २.३.७ सम्म पुगे ।
अर्को वर्ष २०११ को फेबु्रअरीमा हनिकम्ब ३.० सार्वजनिक गरिएको थियो, जसको अपडेट २.२.६ सम्म ल्याइएको थियो । सोही वर्षको अक्टोबरमा आइसक्रिम स्यान्डविच ४.० थप परिमार्जन सहित ल्याइएको थियो ।
जिन्जरब्रेड र आइसक्रिम स्यान्डबीचससँगै त्यसयताका जेलिबीन, किटक्याट, ललीपप र गतवर्ष आएको मार्सल्लो र यो वर्ष आएको नुगट अहिले चल्तीका एन्ड्रोइड भर्सन हुन् । यद्यपि सबै भन्दा बढी एन्ड्रोइड डिभाइस मार्सल्लोमा ३२.३ प्रतिशत छन् भने त्यसपछिको ललीपपमा २९.२ प्रतिशत रहेका छन् ।
गुगलका १६ प्रतिशत डिभाइस किटक्याट भर्सनमा चलिरहेका छन् भने पछिल्लो भर्सन नुगटमा चलिरहेका डिभाइसको हिस्सा १३.५ प्रतिशत छ । २०१२ मा ल्याइएको जेलिविन ४.१ देखि ४.३.१ सम्म सपोर्टमा चलीरहेका डिभाइसमात्र ७.६ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । यसको अर्थ हो गुगलले एन्ड्रोइडको पुराना भर्सनको पनि अस्तित्व मेटिएको छैन ।
बरु पुरानामा पनि अपडेट गरेर गुगलले ग्राहकको मन जितिरहेको छ । एन्ड्रोइडको प्रमुख प्रतिस्पर्धी एप्पलले भने आइफोन फाइभदेखि यताका डिभाइसमा मात्र अपडेट दिइरहेको छ ।
ओरियोमा के छ ?
एन्ड्रोइडको पछिल्ला भर्सनझैं ओरियोले पुराना भर्सनका अधिकांश फिचरको निरन्तरतासँगै केही नयाँ फिचर पनि थपेको छ । यसैसाल आउँदै गरेका फ्ल्यागशीप फोनहरू लक्षित गरेर ल्याइएको ओरियो ८.० मा नोटिफिकेसन, एप सटकट, एप कन्ट्रोल, इन्स्ट्यान्ट मेसेन्जर, पिक्चर, इमोजसँगै सुरक्षामा पनि थप सुधार ल्याएको छ ।
ओरियोको नयाँ फिचरमा तपाइले पृष्ठभूमिमा एप्लिकेसनहरू चलाइरहँदा नोटिफिकेसनमा आएको कुनै युट्युव भिडियो कर्नरमा हेर्न सक्नुहुनेछ । यो फिचर माइक्रोसफ्ट विन्डोजका पुराना भर्सनहरूका कुनै बेला निकै चलेको विन्डोज मिडिया प्लेयरको कर्नरतिर भिडियो फाइल हेर्द पृष्ठमूमिमा अन्य काम गरे जस्तै फिचर हो । जुन फिचर अब एन्ड्रोइडमा उपलब्ध हुनेछ ।
ओरियोमा तपाईंको फेबरेट एपसम्बन्धि नोफिकेसन डटमा उपलब्ध हुनेछ । अर्थात् कुनै एप सम्बन्धि नोटिफिकेसन छ भने डेकटममा रहेको एपको आइकोनमा डट देखिनेछ । त्यसपछि नपाईंले त्यसलाई खोलेर हेर्न सक्नुहुनेछ ।
यो फिचर आइओएसको ३ डी टच फंसनसँग मिल्दो फिचर हो । ओरियोमा विशेष एप एक्सेस मेनुको व्यवस्था छ, यसको सहायताले तपाईं आफ्नो एपहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा नियन्त्रणमा राख्न सक्नुहुनेछ ।
एन्ड्रोइडको यो एप एक्सेस मेनु अन्य भन्दा नयाँ हो । ओरियोमा इन्स्ट्यान्ट एप फिचर पनि थपिएको छ । जसको प्रयोग व्यावसायिक संचारका लागि बढी हितकर हुनेछ । यसका अलावा व्याट्रि लाइफ फिचर र गुगल प्ले सुरक्षा फिचरले पनि नयाँ अनुभव दिनेछ । पिक्चर पपअप मोड र नयाँ इमोजीहरू पनि ओरियोका आकर्षण हुनेछन् ।
आइओएस ओरियो गुगल एन्ड्रोइड ओएस